အဆောက်အဦးအပြင်ရေစိုခံ Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် ID ကိုကတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် IC Card ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် ID ကို / IC Card ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
အဆောက်အဦးအပြင်ရေစိုခံ Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် ID ကို / IC Card ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ် အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် IC Card ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် ID ကိုကတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် ID ကို / IC Card ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, အဆောက်အဦးအပြင်ရေစိုခံ Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
ID ကို / IC Card ကို (125kHz / 13.56MHz) စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တယ်, အသုံးပြုသူစွမ်းရည်ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တယ်.
induction အကြိမ်ရေ: 125kHz / 13.56MHz
ကဒ်အမျိုးအစား: EMID ကဒ်သို့မဟုတ် Mifare နှင့်၎င်း၏သဟဇာတကဒ်
sensing အကွာအဝေး: 1~ 15CM
operating ဗို့: DC9V ~ 15V (စံ 12V)
operating လက်ရှိ: သော့ခတ်မောင်းနှင်မပါသောအခါ≤70mA
output: ပံ့ပိုးမှု Wiegand 26/34
အသုံးပြုသူစွမ်းရည်: 1000~ 10000
operating စို: 20~ 80%
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: 110× 95 × 22mm
KR32 High-စွမ်းရည်ရေစိုခံ access ကိုထိန်းချုပ်စက်ရိုးရှင်းပြီးလုပ်ကိုင်ရန်အမြန်ဖြစ်ပါသည်. ရိုးရှင်းစွာအကပွတ်ဆွဲရန်စီမံခန့်ခွဲမှုကဒ်ကိုသုံးပါ, ပြီးတော့သင်ထည့်သို့မဟုတ် delete ချင်အသုံးပြုသူကဒ်ပွတ်ဆွဲ, သင်ဤအသုံးပြုသူကဒ် add သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်.
နှစ်ခုစီမံခန့်ခွဲမှုကတ်များကို support, ကဒ်များကိုမဖျက်ပစ်ဘို့ကတ်များနှင့်အခြားဖြည့်စွက်ဘို့တ
ပြင်ပ 1 ကွိုင်နှင့် Two-လမ်းကဒ်စီမံခန့်ခွဲမှုထဲကအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်
ပွင့်လင်းတံခါးကို button ကိုထောကျပံ့
အသုံးပြုသူစွမ်းရည် optional ကို
စက်အနက်ရောင်ပလပ်စတစ်ကော်တံဆိပ်ခတ်နှင့်ပြည့်စုံသည်, ရေစိုခံ, နှင့်အိမ်ပြင်ကို install နိုင်ပါတယ်
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်အဆောက်အဦးအပြင်ရေစိုခံ Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်, အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် ID ကို / IC Card ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
prev: အချိန် Recorder များအတွက် Elfin စမတ်တံခါး Controller, အသိဉာဏ်တက်ရောက် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို